शंका | samakalinsahitya.com
मन नलागे पनि बिदा भनेर हात हल्लाउछु । उताबट पनि दुइ हात उठे । थाहा छैन अब हाम्रो भेट हुन्छ या हुन्न तर उनिहरुसँग बिताएका क्षणहरु तथा देखेका भोगेका अनि सिकेका कुराहरुले उनिहरुसँगको भेटघाटलाई ताजा नै राख्छ होला सधैको लागि । एक हप्ता पहिले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय स्नाकोत्तर तह , अर्किओलोजि संकायका दुई विद्यार्थी आफ्नो थेसिसको लागि केही अंश बटुल्न हाम्रो गाँउलाई रोजेर आएका रहेछन । भेट भएपछि उनिहरुसँगै उनिहरुकै सहयोगी बनेर म पनि गाँउमा रहेक पुरातात्विक महत्व बोकेका बस्तुहरुको बिषयमा अझ जानकारी लिन लाग्छु । कस्तुरीले आफ्नो सुवास आँफै पत्ता नपाएजस्तै हामी पनि कति अनविज्ञ रहेछौ कि आफ्नै ठाउँका कति कुरहरुको त सामान्य जानकारी पनि रहेनछ हामीलाई । उनिहरुको सम्बन्धित बिषय भएर पनि होला कतिपय अवस्थामा त म आँफै लज्जित भएँ उनिहरुसँग। <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
यो सत्य थियो कि धेरै बर्ष पहिले देखि हाम्रो गाँउको केदारेश्वर महादेव मन्दिरमा हरितालिका तिजको ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ । त्यो मन्दिर पुग्नु भन्दा कारीब दुई-ढाइ सय मिटर वरिपरीनै आ-आफ्नो महत्व बोकेका बिभिन्न देवी देवताका मन्दिर तथा मुर्तिहरु थिए । मन्दिर देखि त्यस्तै २३० मितर दक्षिण दिशामा ठुल्ठुला शिलास्तम्भहरु , करीब ३ मिटर उचाइ , माथि शिव-पार्वतीका अत्यन्तै कलात्मक अनि सुन्दर मुर्तीहरु सजाइएका थिए । करिब चार बर्ष पहिले एक पटक कसैले स्तम्भमाथि रहेको शिवको मुर्ती चोर्ने प्रयत्न गरेछ तर असफल । पत्याउनै गार्हो पर्ने कुरा के छ भने मुर्ती जती सानो सुन्दर अनि चिटिक्क परेको देखिन्छ तर त्यसमा कुनै अलौकिक शक्ती थियो क्यार सायद उसले केबल १० मिटर जती अघी सम्म घिसारेर त्यहाँ भन्दा अगाडि लान नसकी त्यत्तिकै बाटोमा छाडिदिन्छ । हावा सँगै यो खबर गाँउभरि फैलिन्छ, सबै जम्मा भएर मुर्तिलाई केही समय मन्दिरमै पो राख्ने कि चोरीको खतरा देखियो भन्ने तर्क पनि उठे। अलग-अलग तर्क तथा भनाइहरु निस्केता पनि अन्तत त्यही राख्ने निर्णय गरियो ।अनि फेरी सजियो शिव - पार्वतीको जोडी उसैगरी स्तम्भमाथि ।
आज बिहानै अचानक जताततै हल्ला फैलिन्छ लौ त्यही शिवको मुर्ती फेरी गायब भयो रे ! कसले कसरी र कहाँ लाग्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन तर गाउलेहरु कानेखुशी गर्दै छन रे - हेर त्यो पवन यस्तो होला भन्ने के थाहा ? दुई महिना अघी कहाँ- कहाँका मान्छे ल्याएर गाँउ चाहर्दै थियो कहाँ छन मन्दिर , कहाँ छन मुर्ती , कहाँ छन पाटी, कहाँ छन पौवा खोज्दै फोटा खिच्नेदेखि बुढाबुढी सँग उक्त बिषयमा जानकारी लिने सम्म । आजै एउटा त हुत्त्याई पो हालेछ !
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : मगलबार, 21 जेठ, 2065